Archive du 12-mai-2022
Tolona eto Madagasikara Ny vahoaka maty, ny mpanao politika voky
Feno 50 taona ankehitriny ny tolona tamin’ny taona 1972. Saika fanontaniana apetrak’ireo nanao ny lohahevitra ho fanamarihana izany moa ny hoe nitondra inona izany tolona izany?
Dia mbola hitohy ihany izany izy ity rehefa jerena ny fanomezana fanazavana isan-karazany avy amin’ireo
FRANTSA NAHENA HATRANY NY FATRANA ENTANA AMIDY
Miha mahoraka hatrany ny antsoina hoe “Réduflation” na fomba fanenana ny fatra na habetsaky ny entana amidy eny an-tsena ao Frantsa ao amin’izao fotoana izao.
Androm-bavaka maneran-tany eto Madagasikara Hifanakalo polipitra ny fiangonana zokiny sy zandriny
Ny 4 jona 2022 izao no tontosaina ny “Androm-bavaka maneran-tany” na “Global day of prayer”. Ho an’ny Madagasikara manokana dia ny eo anivon’ny fikambanana Mampiely baiboly Malagasy no mpandrindra azy io.
Loza nahafaty an-dRamarolahy Tanjonirina Omena valisoa izay manam-baovao momba ilay fiara nandona azy
13 andro katroka omaly alarobia 11 mey ny nandaozan-dRamarolahy Tanjonirina Victorio ny tany, ilay tovolahy vao
Fametrahana pylone ao Ambodiafontsy Tsy afa-manoatra amin’ny ataon’ny fanjakana ny kaominina
Tsy afa-manoatra amin’ny hafitsoky ny Fitondram-panjakana ny kaominina Ampitatafika manoloana ilay pylone najoron’ny Ministeran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra an-tery setra ao amin’ny Fokontany Ambodiafontsy.
SECES Sampana Antananarivo tanambana hanao fitokonana faobe
Nisy ny fihaonan’ny solontenan’ny mpampianatra mpikaroka eo anivon’ny SECES manerana ny nosy tamin’ny minisitry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ny talata lasa teo nahafahana nandinika sy niheritreritra
Antoko politika VAMI “Mahalala ny atao hoe fitohizan’asa ny olona”
Kobaka am-bava hatreto no hita ataon’ny mpitondra ankehitriny mba tsy hilazana hoe mandainga, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko politika Vahoaka Miray na VAMI, Gaby Vakiniadiana.
Mpangalatra tamana any am-ponja Misy tsy te-hisasatra sy tsy te hiasa saina intsony
Raha toy ny helo faharoa ny fijerin’ny rehetra ny fiainana any am-ponja amin’ny ankapobeny dia tena fiaraha-monina mirindra sy milamina ny any ho an’ireo mpanao ratsy sasany.
Loza tany Arivonimamo Nodimandry omaly ilay raim-pianakaviana nitondra moto
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny amin’ny Jovena Arivonimamo ny faran’ny herinandro teo. Moto nentina raim-pianakaviana iray no nifandona tamina kamiao iray lehibe.
Fomban-tany sy ny kristianina Ny fifanajana no tena zava-dehibe
Efa miha manakaiky ny fialan-tsasatra lehibe. Tsy vitsy ireo mikasa hivoaka any amin’ny faritra mba hialana amin’ny rotorotom-piainana manavesatra isan’andro,
Razafinjoelina Tahina “Tsy maintsy atao ny fanagasiana”
Raha ny tantara no jerena dia tokony nitondra zavatra tsara ho an’ny firenena ireny fotoana ataoko hoe mahamay ireny, hoy ny filohan’ny antoko politika Tia Tanindrazana sady mpampianatra eny amin’ny anjerimanontolo,
Rodoben’ny mpanohitra “Ravao ireo governora raha misy HCC eto”
Ravao ireo governora raha misy HCC eto, hoy omaly tetsy Bel’air ry zareo avy eo anivon’ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara na RMDM.
Saika hijoko ny vadiny Nofirain’ny rafiny tamin’ny antsy avy aoriana ilay vehivavy
Ramatoa iray saika hijoko ny vadiny tany an-tranon’ny rafivaviny ny Alatsinainy hariva teo, tokony ho tamin'ny 07 ora sy sasany no nahita loza tsy fidiny.
Distrikan’i Miandrivazo Noraisim-potsiny ireo mpivarotra taolam-paty
Mpirahalahy iraitampo nikasa hivarotra taolam-paty no saron’ny mpitandro ny filaminana tao Soatanimbary, kaominina ambanivohitra Manambina distrikan’i Miandrivazo omaly.
Antsohihy Miparitaka ny vola sandoka 20.000 Ar
Miparitaka ny vola sandoka 20.000 Ar miloko manga any amin’ny distrikan’Antsohihy. Ireo mpivarotra sy mpanao Cash point no fantatra fa efa lasibatra tamin’izany ary efa nahenoana fitarainana betsaka.
Andohatapenaka Maty notsatohan'ilay lehilahy antsy ny rafilahiny
Zava-doza no nitranga tao Andohatapenaka. Nantsoina tovovavy iray ilay sakaizany taloha ary nilaza izy fa vonoin'ilay lehilahy miaraka aminy amin'izao ka mila vonjy.
Vanim-potoanan’ny ririnina Tena hamirifiry ny hatsiaka amin’ity hoy ny meteo
Efa manomboka miditra tsikelikely ao anatin’ny vanim-potoanan’ny ririnina isika eto Madagasikara raha araka ny fanazavan’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro etsy Ampandrianomby.
Tena mampiaiky volana nama ny zavatra vitanareo a.Tsy nisy nanambotra, tsy nisy nikitika mihitsy hoe ny lalam-pirenena faha 44 ?